TCDD dib ugama laabato tigidhada tigidhada billaha ee YHT | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTCDD dib ugama laabato tigidhada tigidhada billaha ee YHT
tcdd yht ku biiritaanka billaha ah dib ugama noqonayso qiimaha tigidhada
Iyada oo laga jawaabayo TCDD Tasimacilik jawaabta “xad dhaafka ah ee socodka” ee ku saabsan tigidhada xawaaraha sare (YHT), ka dib qabanqaabada ku xusan bayaanka “qiime dhimista”, indhaha ayaa loo rogay tillaabooyin cusub oo lagu qaadayo gadiidka rakaabka.
Olcay Aydilek oo reer Habertürk ah ayaa ka qaatay garaaca maaraynta TCDD. Sidaas darteed, majiraan talaabo dib loogu laabanayo canshuuraha cusub. Dakhliga cusubi wuxuu khuseeyaa 7 kun oo qiyaastii 350 milyan oo rakaab ah oo loo yaqaan 'YHT' sanadkiiba. Ujeeddada TCDD Tasimacilik waa in si tartiib tartiib ah loo yareeyo khasaaraha 1 bilyan ee TL sannad kasta; In la kordhiyo tirada rakaabka iyo tayada adeegga gaar ahaan qeybta ganacsiga ee ay doorbidaan dadka ganacsatada ah. Majiro sharci cusub oo laguma odorossiinayo tigidhada loo yaqaan 'YtT' ka dib “hagaajinta dhimista”. Kordhinta tayada adeegga cuntada, kororka qiimaha tikidhada “heerka ganacsiga” ayaa loo arkaa si hubaal ah.
TCDD Tasimacilik wuxuu qaaday talaabooyin muhiim ah oo quseeya qiimaha tigidhada YakT, oo dhaqan galay laga bilaabo maalmihii ugu horreeyay ee bishaan. Marka hore, qaban-qaabooyin ayaa loo sameeyay tikidhada heerka ganacsiga. Laga bilaabo bisha Janaayo 3, qiima dhimista "heerka ganacsiga" gebi ahaanba waa laga saaray.
Kadib, faa iidada sicirka tikidhada safarka ee wareega ee ay adeegsadaan kuwa ku safra isla isla (tusaale ahaan inta udhaxeysa Ankara-Eskişehir ama Ankara-Konya) ayaa la baabi'iyey sicir-dhimisyadii lagu sameeyay tikidhadan ayaa si weyn hoos loogu dhigay. Qaban-qaabadaas kadib, canshuur-dhimis cusub ayaa la dhaqan galiyay.
Akhri sheekada oo dhan Riix halkan
Ardayda Raadinta ah ee Gaadiidka Dadweynaha ee Boosaasta ah
Tallaabada Tallaabada Tallaabada Ankara Sivas YHT
51 go'aanka hooyo ee nidaamka tareenka ayaan dib u soo celin
Dib-u-noqosho kala-soocidda waddooyinka tareenada ee ka yimaada Midowga Yurub
TCDD Port Bandirma ayaa ku dhawaaqday hindisaha hindisaha dhismaha
Qiimaha tigidhada YHT